Sable ChiGerman Mufudzi - Iyo Yekupedzisira Kuberekerwa Gwaro - Inobereka
Sable ChiGerman Mufudzi - Iyo Yekupedzisira Kuberekerwa Gwaro
Iyo yechokwadi yakasarudzika, iyo Sable yakavezwa yeGerman Mufudzi ndiyo inonyanya kukunda jasi jasi kune vese vafudzi, asi chii chinoita kuti ive yakakosha kudaro?
Zvakanaka, iyo Sable ChiGerman Mufudzi ndiro chete iro rinoenderana neiyo imbwa yenhengo yekutanga nhengo yakasimba pfungwa wembwa yechokwadi Mufudzi .
Rudzi rwakakodzera kune vanhu vanoshingaira, vakaroora kana mhuri, iyi canine imbwa hombe uye yakangwara, yakatendeka uye ine rudo imbwa.
Pano isu tichagovana newe yedu yakazara imbwa gwara, kubva pakuberekesa nhoroondo uye hunhu kune imbwa uye zvido zvekurovedza muviri, iwe unozogona kunzwisisa kana rudzi urwu rwakakukodzera.
Chii chinonzi Sable Mufudzi wechiGerman?
Kennel Kirabhu Kuzivikanwa
Sable ChiGerman Mufudzi Puppy
Sable ChiGerman Mufudzi Temperament
Sable ChiGerman Mufudzi Saizi & Chitarisiko
Sable ChiGerman Mufudzi Imbwa Yekutarisira Nhungamiro
Haisi chakavanzika chekuti Mufudzi wechiGerman akatanga kuGerman.
Rudzi urwu rwakangwara uye rwakavimbika runogona kupihwa mvumo kuna Max von Stephanitz.
Muna 1899, Von Stephanitz akasangana nembwa inonzi Hektor. Akashongedzwa uye akafadzwa naHektor, zvakanyanya kudaro, akamutora achichinja zita rake kuita Horand von Grafrath.
Von Stephanitz akatanga Sosaiti yeGerman Mufudzi imbwa, nguva pfupi yapfuura uye ndokutanga chirongwa chekuberekesa.
Yakasarudzika sarudzo yehono imbwanana yakaitwa naVon Stephanitz uye imbwa yake, Hektor akabereka huwandu hwevane makumi matanhatu nevana.
Yakanga isiri kusvika makumi maviri emakore gare gare, muna 1908 apo rudzi urwu rwakazivikanwa zviri pamutemo neAmerican Kennel Club.
Pakupedzisira, mukurumbira werudzi urwu wakakura uye wakapararira pasirese.
America kuda imbwa kuberekesa kunogona kupihwa mvumo kune nyeredzi dzemamuvhi senge Rin Tin Tin.
Iwe unogona kunge wakaonawo mumwe padivi paWill Smith mu 'Ini ndiri Ngano'.
Nhasi, Mufudzi wechiGerman ndiye yechipiri inonyanya kufarirwa imbwa muUnited States.
Iyo yeGerman Mufudzi wemuviri uye hunhu hunhu hunokwezva vadikani vembwa kune iyi canine.
Kuvimbika kwavo uye moyo munyoro, pamwe nekuchinjika, zvinoita kuti rudzi urwu ruzive nhengo yecaneine kuwedzera kune chero mhuri.
Iyo Sable yeGerman Mufudzi ine yakanakisa hunhu.
Sable ChiGerman Mufudzi anozivikanwa sembwa yekutanga, achigovana DNA ne mhumhi madzitateguru avo .
Ndiyo chete jasi jira risina kutsauka kubva kuna Von Stephanitz's ideology.
Iyo Sable jasi ndiyo yakakosha geni uye yaive yekutanga mhando yeGerman Mufudzi.
Kuonekwa kweiyi canine kwakanaka, zvisinei, iwo akasiyana jasi akaravara eMufudzi haana simba pahunhu, hutano kana hunhu.
Nhasi, huwandu hweGerman Mufudzi mavara akavezwa kubva chena kusvika nhema, uyezve, sable yekutanga.
Sable ChiGerman Mufudzi Chokwadi Tafura
Saizi 22 kusvika ku24 inches for vakadzi uye 24 kusvika 26 inches for male
Kurema 55 kusvika 73lb yevakadzi uye 75 kusvika 95lb yevanhurume
Hupenyu 9 - 13 makore
Rudzi rwekubereka Kuchengeta Mbeu
Chinangwa Kushanda Imbwa
Inokodzera For Vanhu Vangu Vanoshanda, Vakaroora Uye Mhuri
Ruvara Sable, Tan, Goridhe, Dema, Chena, Chiropa, Bhuruu, Parti, Panda Kana Musanganiswa Wemamwe Chero maviri
Kudzikama Kuzvisimbisa-Iwe, Une Rudo, Wakavimbika, Unodzivirira Uye Wakangwara
Zvimwe Alsatian, Berger Allemand neGerman Mufudzi Imbwa
Idzi imbwa dzinokura nekukurumidza uye dzinosvika pakukura kwavo panyama pamwedzi gumi nemasere kusvika makumi maviri nemana.
Sezvo imbwa, nzeve dzadzo dzinodzika pasi padivi pemusoro wadzo, zvisinei sezvavanokura, nzeve dzavo dzinomira.
Ivo zvakare vanoita kukura mumusoro nemakumbo .
Paavhareji, hukuru hwemarara hwakatenderedza vana vasere asi inogona kutenderera chero kubva pa5 kusvika pa9.
Mhando dzakanakisa dzeSable German Shepherd dzinowanzodhura pakati pe $ 800 kusvika $ 1,500 USD . Izvi zvinoenderana neropa, madzinza uye muberekesi.
Izvo zvakakosha kuti uzive wako anoberekesa, ane ruzivo uye anozivikanwa mushambadzi anozopa varidzi vatsva vane chiuno zvibodzwa, uye yevabereki nhoroondo (i.e. pedigree).
Iwe unofanirwa zvakare kuwana zano rakanaka rehunhu hwako hwembwanana nekusangana nevabereki vese (asi sekushoma kwedhamhu).
Iyi canine inoramba ichichengetwa uye ichishandiswa sembwa inoshanda ine zvinongedzo kumauto nemapurisa.
Hunhu hwavo hune moyo murefu uye vanopindura zvakanaka kumuridzi wavo sezvavanozvishingisa uye vane chivimbo chakanyanya, vachivaita imbwa dzinoshanda kwazvo.
Mhuka yavo yekutyaira yakakwira zvakanyanya, zvisinei, kana kushamwaridzana zvakanaka uye kubva pazera diki ipapo hakuzove nechero matambudziko mukubvisa chero mhuka dzekutyaira nyaya.
Paunenge iwe wajairana nerudzi urwu ipapo unozonzwisisa kuti vane rudo uye vane moyo wakakura sei ivo.
Vanogona kugadzira imbwa dzinorinda dzakanaka, dzichipa kudzivirira kune varidzi vadzo. Izvi zvakasanganiswa nekudzidziswa kwavo kwepamusoro, ndizvo zvinoita kuti vakoshe zvakanyanya pabasa mukati memasoja nemapurisa.
Kuve imwe yema canine ane hungwaru, iyo Sable ChiGerman Mufudzi anopfuura kugona kugona kusiyanisa pakati pekutyisidzira nemamiriro asingatyisidzi.
Zvisinei, zvakafanana ne Russian Bear imbwa , vanogona kungwarira vausingazive uye nokudaro sumo dzakakodzera dzingave dzichidikanwa.
Iyo Sable yeGerman Mufudzi akaverengerwa kushanda, zvisinei hunhu hwavo hwakanyatsonaka hunhu.
Kufanana nevaFudzi vese, vanogona kurondedzerwa sevakavimbika, vane rudo, vanoshanda uye vanoshanda nesimba. Kuda kwavo kushanda zvakaoma zvinoreva ivo zvakasikwa vane simba rakasimba rekufadza varidzi vavo.
Pakutanga vakagadzirwa nekuda kwehungwaru uye kugona kwavo kushanda, vafudzi vemazuva ano veSable veGerman vakatsauka kubva pachinangwa ichi chete uye ikozvino vakafambiswa. kuve nhengo yemhuri inoyevedza uye inochengetwa mumhuri .
Ivo vanoita yakawedzera yekuwedzera seye fur-nhengo kune chero imba nekuda kwekudzidziswa kwavo, rudo rudo, uye kuvimbika.
Iyo Sable yeGerman Mufudzi anowirirana zvine mukurumbira nevana. Ivo vanogona kuve vane mutsa, vanyoro uye vanotamba pavanenge vachida kuve.
Kana akaunzwa uye kushamwaridzana achiri mudiki, saka vanogona zvakare kufambidzana zvakanaka nekatsi nedzimwe mhuka.
Pakazara, vane hunhu hwakanaka kune wese munhu (kunze kwevapambi) uye vanogona kuchinjika kune chero mararamiro. Vanoda kufamba musango, mahombekombe uye kunyange nyore imbwa paki nzendo.
Kuramba uchikwesha imbwa yako kwakakosha, kunyanya panguva yekuvhuvhuta mwaka.
Yakarongedzwa seyakakura imbwa dzinza, mukono Sable wechiGerman Mufudzi anorema pakati pe75 kusvika 95 mapaundi, uko mukadzi ari akareruka zvishoma pa55 kusvika 73 mapaundi.
Murumewo anomira akareba, pakureba kwemasendimita makumi maviri nemana kusvika makumi maviri nematanhatu zvichienzaniswa neechikadzi pamasendimita makumi maviri nemaviri kusvika makumi maviri nemana.
Nesimba rakasimba, remhasuru uye remitambo, iwo maitiro akasanganiswa nejasi rine ruvara.
Mutsetse wemuviri wavo unoratidzira chimiro cheS apo hafu yepamusoro yemuviri wavo yakareba kupfuura kumashure kwavo sezvo ivo vakareba kupfuura ivo vakareba.
Mufudzi wechiGerman wechiGerman ane tomo refu ine mhino nhema uye shaya yakasimba.
Ivo vane nzeve dzakasimudza dzinogara pamusoro pehenya ravo rakaomarara.
Maziso avo anowanzo mutsvuku. Zvisinei, dzimwe nguva White German Shepherd ine inokwezva maziso ebhuruu.
Panyama, iwo rudzi rwakasimba kwazvo, ane chitarisiko chisina kutsauka kure nemadzitateguru avo emhumhi .
Iyi imbwa inogona kuuya nemhando dzakasiyana dzinosanganisira:
Ivo vanowanzo kuve nemasiki matema akakomberedza maziso avo, akafanana neZorro ( zvinoitika kugadzira zita hombe reGerman Mufudzi )!
Iyi mask yakasviba ine hutema hutema iyo inowanikwawo muchimiro chechigaro kumusana kwavo. Aya mamaki haawanikwe pane dema diki misiyano .
Iyo Sable yeGerman Mufudzi inozivikanwa seine maviri akasiyana jasi akasiyana: epakati uye yakareba .
Nguvo yavo ichave yakatetepa uye yakatwasuka.
Pamusoro pezvo, vane jasi rakapetwa kaviri, iri jasi rakapetwa rinotendera imbwa kuti igadzikane zvakanaka sembwa inoshanda mumamiriro ekunze akasiyana.
Iyo yepakati jasi jeni iri kukunda, nepo iyo refu jasi jeni rakawandisa .
Mufudzi wechiGerman ane jasi repakati ndiyo chete jasi inogamuchirwa nemhando yekubereka . Nekudaro, izvi hazvireve kuti akafukidzwa maGerman vafudzi vasina kuberekwa, ivo havakwanise kukwikwidza!
Iri jasi re canine rinodurura kazhinji. Muchokwadi, ivo vanoteura zvinoenderana nekuchinja kwemwaka. Iwe unogona kutarisira hura hwakawanda hwesadza kutenderedza imba yako padhuze nemwedzi inodziya sembwanana yako inodurura nguvo yavo yechando mukugadzirira zhizha.
Kushambidzika mukati memwedzi iyi kunogona kuve nyore kune vagadziri vemunharaunda. Ivo vanozopuruzira chaiko bvudzi risingade.
Edza kujairira mbwanana yako kune yekuomesa yekuomesa pazera diki kana zvichibvira .
Paunenge iwe wawana mbwanana, iwe unogona zvirokwazvo kutarisira kupukuta zvishoma kupfuura zvakajairwa.
Kugeza wako Mufudzi wechiGerman kunofanirwa kungoitwa kana zvichidikanwa. Semuyenzaniso; kana vakafunga kuti ipfungwa yakanaka kumwaya mumatope, kana kumonera shamwari dzavo.
Nekudaro, kugeza kusiri madikanwa kunogona kutsamwisa ganda rembwanana yako sezvo iwe uchizobvutisa yavo fur yemafuta ayo echisikigo.
Kuchenesa mazino ako einini yakakosha zvakaenzana. Mapfupa inzira yakanaka yekubvisa mazino emazamu asingadiwe.
Iyi imbwa imbwa inogona kunge iri mhando yekutamba.
Inozivikanwa nekuve yakangwara, inoshanda uye inomhanya mhando, zviri nyore kudzidzisa asi zvichiri kuda huwandu hwakawanda hwekurovedza muviri pazuva.
Ichi chizvarwa chakanakira vanhu vanoshingairira, vakaroora uye mhuri, asi nekuda kwekukwirira kwavo kwepanyama uye kwepfungwa, ivo havana kukodzera vakweguru.
Iyo Sable ChiGerman Mufudzi inoda chikafu chemhando yepamusoro icho chakafuma mumapuroteni. Uyu mutambo wemitambo uye unoshanda saka chikafu chavo chinoda kuvapa iro rakakosha simba.
Yakakurumbira sarudzo yeiyi imbwa chikafu chisina kubikwa-nyama .
Nekudaro, zvimwe zvekudya zvakasvibirira - hazvipe iyo imbwa mavitamini avo anokosha nemaminerari uye nekudaro kuwedzerwa uye kubvunzana kwekudya nachiremba wemhuka kunokosha.
Kana iwe ukasarudza iyo yakanyorova kana yakaoma kabbled chikafu, saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti izvi zvikafu zviri zvinoenderana nemitemo yeAAFCO .
Semwana wembwanana, unofanirwa kufudza pooch yako kaviri kana katatu pazuva. Nekudaro, sezvavanokura uye vova vakuru kudya kaviri pazuva kwakanaka.
Maminitsi Maminitsi zana nemakumi maviri
Iyo Sable yeGerman Mufudzi inoita yakanakisa inomhanya mudiwa.
Zvisinei, usatarisira kuti vave Usain Bolt pakarepo! Sembwanana, Mufudzi wako haasati achizokwanisa kumhanya kwenguva yakareba (kuita kudaro kunokonzeresa matambudziko asingadiwe sevanhu vakuru).
Kamwe ikakura uye ichigona, rudzi urwu runofarira kuenda kumhanya kwemazuva ese.
Taurira mbwanana yako kushambira paunotenda kuti vakagadzirira. Izvi zvichaita kuti vagone kupota vachitenderera mudziva, rwizi kana dhamu zvine chivimbo.
Rangarira, kurovedza muviri kunosanganisira chero mhando yesimba rinopisa chiitiko saka kutamba nguva kuverenga zvakare.
Tinokurudzira kutenga mamwe matoyi, tanga netennis bhora uye frisbee.
Kudzidzisa mbwanana yako kunofanira kutanga nekukurumidza sezvazvinogona. Kunyangwe kubva pazera diki, ivo vanokurumidza vadzidzi vasingadi chimwe chinhu kunze kwekukufadza iwe.
Kukosha kwekushamwaridzana kwakakodzera haigone kusimbiswa zvakakwana. Iyo Sable ChiGerman Mufudzi inoda inowirirana uye yekutanga kushamwaridzana nenzvimbo dzakasiyana, vanhu, uye mhuka.
Izvo zvinouya hazvishamise kuti iyo Sable yeGerman Mufudzi wedzinza iri nyore kudzidzisa.
Ichi chizvarwa chinozivikanwa nekugona kwavo kugona uye njere.
Dzakanaka nzira dzekusimbisa ndidzo dzazvino standard yegoridhe yekudzidziswa canines . Iko kushandiswa kwemubairo (matoyi kana chikafu) zvakasanganiswa nekurumbidza, ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekudzidzira.
Muchokwadi, varairidzi vembwa dzemapurisa vanoshandisa matoyi seyakajairwa fomu yemubairo wevose veGerman Mufudzi puppy yakanaka yekusimbisa kudzidziswa.
Nekuti iyo Sable ChiGerman Mufudzi akangwara uye anoda kuziva imbwa dzinza, kukurudzira kwepfungwa chinhu chakakosha.
Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekubatanidza imbwa yako nekuchinja uye nharaunda dzakasiyana.
Mitambo zvakare inzira yakanaka yekusimudzira mupfungwa Mufudzi wako.
Rudzi urwu rwunoita mushe pamitambo yakadai sekutora, tug-o-war uye kuvanza nekutsvaga! Vane mhino dzakapinza saka kuviga mabatirwo nematoyi ipfungwa yakanaka.
Mufudzi wechiGerman wechiGerman anogadzirirwa zvine hungwaru nyaya dzehutano dzinogona kunge dzave mhedzisiro yekuberekesa panguva yekutanga kwemhando idzi.
Imwe nyaya yakajairika yehutano yeGerman Mufudzi kubereka chiuno dysplasia .
Hip dysplasia chirwere apo pane zvakashata kuumbwa kwekubatana kwebhora rehudyu nesoketi.
Nekuti hudyu dysplasia inzvimbo yekugara nhaka - kune chete zvakanyanyisa izvo zvinogona kuitwa kudzivirira ichi chirwere.
Nekudaro, nharaunda yembwanana yako inogona kukuvadza kana kukurumidza kukura kwechirwere.
Mufudzi wechiGerman Mufudzi ndiye rudzi rwembwa rwekare uye iri musiyano weruvara uyo wakagara padhuze padyo nerudzi rwepakutanga.
Rudzi urwu rwunozivikanwa nekuzvivimba, kuchengetedza, kungwara, kuda uye kuvimbika - kuriita shamwari yakakwana kune chero munhu ari kushanda uye anoda kupa nguva yake kune ino canine.
Kuchengeta vana, anoshanda anomhanya mudiwa uye akavimbika sidekick, hapana kana chakaipa chingataure nezve rudzi urwu chero bedzi ivo vakadzidziswa uye kusangana zvakanaka.
Kana iwe uine nguva yavo, saka ivo vanozove neyako nguva.
Anovimba, Anoshanda nesimba Mufudzi wechiDutch ndiye Anotevera Akanakisa Mate
500+ Mazita eBulldog: Sarudza Iyo Yakakwana Zita Kune Yako Bulldog
maltese yakasanganiswa neshih tzu
husky kusanganisa negoridhe Retriever puppy
shih tzu uye poodle musanganiswa
ndoziva sei kuti ndine imbwa rudzii
yakawanda sei teacup chihuahua